I-spectrum eyimfihlakalo ye-Brocken, into ebonakalayo yokufuna ukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-spectrum eyimfihlakalo ye-Brocken, into ebonakalayo enelukuluku
Njengoba ilanga seliyoshona, i-engeli amaphrojekthi wokukhanya aseduze kobuso ithambekele ku-180º, ukuze ithambe Uma sibona isithunzi sethu, siyabona ukuthi sihlala isikhathi eside kangakanani futhi siba side, futhi uma ingaphezulu lisezingeni ngokwanele futhi singenazo izithiyo ezivimbela ukubukeka kwethu, isithunzi singakhula size sihambe amabanga amade. Ububanzi beBrocken bususelwa kulo mgomo nokuthi kunenkungu, eqanjwe ngeNtaba iBrocken Amamitha ayi-1142 ngaphezu kogu lolwandle eziNtabeni zaseHarz, eJalimane.
Abagibeli bezintaba abeza lapho babekwazi ukubona ukushona kwelanga, beshiya iLanga ngemuva kwabo, umugqa walo omude oboniswe enkungwini, ejwayele ukwakheka. Kwesinye isikhathi, uma ubheka kude, imisebe yeLanga yakha uhalo wemibala yothingo. Lowo halo yi-Brocken specter.
Kungani ilukuluku kangaka?
Ngoba isibuko seBrocken kungaba kuphela umuntu ophonsa isithunzi. Akukhathalekile ukuthi abanye abantu bahamba nawe, i-halo ingabonakala kuphela kumuntu onesithunzi sakhe esikhonjisiwe. Ngakho-ke, uma wonke umuntu ekulungele ukubona izithunzi zakhe, uzobona kuphela i-aura yakhe enemibala nezinye izithunzi zabangane oziveze enkungwini kungekho okunye. Esinye sezimo ezihambisana nalokhu ukuthi kubonakala sengathi umboza umzimba ngempela. Njengoba isithunzi sibonakala enkungwini, umfanekiso womuntu awubonakali ulele phansi, kodwa ngendlela emnyama usamile.
Ububanzi, ngisho nokuba buvela eBrocken, bungabonakala kwenye indawo. Ezikhathini zasendulo, lesi simo sasingaphezu nje komphumela wokubuka. Ukuba khona kwama-halos noma ama-areola azungeze umzimba noma ikhanda, kwakufana nohlobo lwesibonakaliso saphezulu, sokuthi uNkulunkulu wayekhethe lowo muntu ngenhloso ekhethekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-spectrum eyimfihlakalo ye-Brocken, into ebonakalayo enelukuluku
Ukwanda kokukhishwa kwe-CO2 kuzothena amandla imvula yaseNyakatho Melika
Yini ama-donuts eqhwa futhi akhiwa kanjani?